China Metal stamping mpanamboatra sy mpamatsy | Mestech
Ny fametahana metaly dia ny fampiasana totohondry ka maty hanaparitahana na hanorotoroana vy tsy misy fangarony, vy, aliminioma, varahina ary lovia hafa ary fitaovana avy any ivelany mba hahatratrarana endrika sy haben'ny dingana iray.
Ny fizotry ny fitomboka dia azo zaraina amin'ny fizarana fisarahana sy ny fananganana dingana (ao anatin'izany ny miondrika, ny fanaovana sary ary ny mamorona). Ny fizotran'ny fisarahana dia ny manasaraka ny ampahany manisy tombo-kase sy ny banga manaraka ny tsipika contour sasany ao amin'ny fizotry ny fitomboana, ary ny kalitaon'ny fizarana misaraka amin'ilay ampahany manisy tombo-kase dia tsy maintsy mahafeno fepetra takiana; ny dingan'ny famolavolana dia ny fanaovana ny fametahana endrika plastika banga eo ambanin'ny toe-javatra tsy misy fahasimbana, ary manova azy ho endrika takiana vita vita, ary koa mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fandeferana dimensional sy ny lafiny hafa.
* Araka ny toetran'ny mari-pametahana, misy fomba roa amin'ny fametahana mangatsiaka sy fametahana mafana. Miankina amin'ny tanjaka, plastika, ny hateviny, ny mari-pahaizana deformation ary ny fahaizan'ny fitaovana, ary ny toetran'ny fitsaboana hafanana tany am-boalohany sy ny toetran'ny serivisy farany an'ny fitaovana tokony hojerena. 1. Ny fanodinana vy nohitsorina mangatsiaka amin'ny hafanan'ny efitrano, amin'ny ankapobeny dia mihatra amin'ny hatevin'ny banga 4mm latsaka. Manana tombony izy io raha tsy misy fanafanana, tsy misy hoditra oksida, kalitao tsara, fandidiana mety ary vidiny ambany. Ny fatiantoka dia ny fisehoan-javatra manamafy ny asa, izay mahatonga ny vy tsy hanana fahaizan'ny deformation intsony. Ny hatevin'ny banga dia fanamiana ary tsy mila tohotra. 2. Ny fametahana mafana ny metaly dia hafanaina amin'ny maripana sasany. Ny tombony dia ny manafoana ny adin-tsaina anatiny, misoroka ny asa mafy, mampitombo ny plastika, mampihena ny fanoherana ny fiovana ary mampihena ny fanjifana herinaratra amin'ny fitaovana.
* Vokatra nohomboana
Vy nohitsakitsahinao harato fiarovana
Fantsom-patana vita amin'ny aliminioma
Takelaka vy nohitsakitsahana
* Singa telo fototra amin'ny rafitra famokarana stamping: maty, gazety ary vy metaly
1. Punching Die Die dia maty maty amin'ny famokarana nohomboana. Misy karazany telo ny stamping maty: maty tsotra, maty mitohy ary maty fatotra.
Die Die dia maty ilaina amin'ny famoahana stamping. Misy karazany telo ny stamping maty: maty tsotra, maty mitohy ary maty fatotra.
(1) Maty tsotra: ny maty tsotra dia maty izay tsy mahavita afa-tsy dingana iray amin'ny famelezana gazety iray. Izy io dia mety amin'ny famokarana batch amin'ny ampahany endrika tsotra.
(2) Maty mitohy: amin'ny tsindry iray amin'ny asa fanaovan-gazety, ny maty izay mameno ny fizarana stamping maromaro amin'ny faritra samihafa amin'ny maty amin'ny fotoana iray dia antsoina hoe maty mitohy. Ny maty mitohy dia mety amin'ny famokarana mandeha ho azy avo lenta.
(3) Compound die: amin'ny lalan-drà, amin'ny faritra iray amin'ny maty ihany koa mba hamenoana ny fizarana stamping maromaro amin'ny fotoana iray, fantatra amin'ny hoe die maty. Compound die dia mety amin'ny fametahana faritra misy output lehibe sy avo lenta.
Maty ny fitambarana
2. Masinina mametaka
Ny famokarana fanaovana pirinty dia natao indrindra amin'ny lovia. Amin'ny alàlan'ny bobongolo, dia afaka manamboatra banga, totohondry, mamorona, manao sary, mamarana, manarona tsara, mamolavola, mametaka ary manaparitaka ampahany, sns., Be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany. Ohatra, mampiasa switch, sockets, cup, cupboard, lovia, solosaina isika, ary na dia ny fiaramanidina balafomanga aza dia be dia be ny kojakoja azo vokarina miaraka amina totohondry amin'ny alàlan'ny lasitra. Betsaka ny karazana milina fanaovana totohondry.
(1) Herinaratra fanaovan-gazety mekanika Punch mekanika dia tapaka lalan-dra, haingam-pandeha azo ovaina ary famokarana ambany. Hafainganana ambony indrindra 180 heny / min.
(2) Press Press
Ny punch hydraulic dia afaka manitsy ny stamping stroke amin'ny alàlan'ny valizy hydraulic mba hanatsarana ny vokatra. Ny hafainganam-pandeha avo indrindra dia mety hahatratra 1000 heny / min. Ny fatiantoka dia ny fanjifana herinaratra avo, ny fepetra takiana lehibe amin'ny tontolo iainana ary ny fikojakojana mavesatra ny asa.
(3) Fanaraha-maso punch fanaraha-maso isa
Amin'ny fampiasana motera servo handroahana ny loha, avo ny famokarana, hatramin'ny 800 heny / min. Fanjifana herinaratra farany ambany, fikojakojana mora ary habe kely. Noho izany, nampiharina tamim-pahavitrihana izy io.
Ho an'ny fametahana metaly tsotra, ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa punch mekanika. Araka ny ranoka samihafa ampiasaina amin'ny tsindry hydraulic, dia misy milina fanodinana sy famonoana hydraulic. Ny ankamaroan'izy ireo dia mampiasa milina fanodinana hydraulic, raha ny milina fanodinana hydraulic kosa dia ampiasaina amin'ny milina goavambe na manokana. Noho ny tombony miavaka ananany dia ampiasaina bebe kokoa hatrany ny famelezana motera servo.
Fanaraha-maso nomerika Turret Punch Press
Pressure an'ny angovo mekanika
Fitaovana fanoratana 3. Ny haingon-kazo amin'ny faritra sasany dia lovia matetika. Ireo fitaovana voafantina ho an'ny famolavolana vokatra dia mifanaraka amin'ny fahombiazan'ny vokatra, toy ny henjana, tanjaka ary fitarika amin'ny vokatra. Etsy ankilany, tokony mahafeno ny fepetra takin'ny plastika, ny kalitaon'ny tany ary ny hatevin'ny fizotry ny fitomboana. Ny firafitry ny firafitry ny faritra nohitsakitsahana dia tokony handinika tsara ny fizotran'ny fizotry ny stamping, ny radius miondrika, ny lavaka fametahana, ny fandaminana, ny halalin'ny sary, sns. ary ny fanoherana deformation ambany, ary mety amin'ny fametahana mangatsiaka. (1). Vy metaly: SPCC / SPCD / spce, SECC / SECD / sece, SGCC, sgld, Sus (2). Firaka alimina: al1050p, al1100p, al5020 (3). Firaka varahina: varahina Pb phosphor, varahina mahery HBS (4). Kitapo nikela Cupro.
* Teknolojia fitsaboana ambonin'ireo faritra nohitsakitsahana rehefa vita ny metaly tamin'ny voalohany, dia mila manova ny metaly amboniny izy io, manatsara ny endriny ary manova bebe kokoa ireo toetra ara-mekanika sy ara-batana ary simika an'ny velaran'ny metaly. Ity dingana ity dia antsoina hoe fitsaboana metaly. Ny tanjon'ny fitsaboana amin'ny vy dia mizara ho sokajy efatra:
(1) Tsara tarehy
(3) Toetoetra manokana ambonin'ny tany
(4) Hatsarao ny toetra mekanika, toy ny fanoherana, ny hamandoana sns.
* Karazana fitsaboana amin'ny alàlan'ny elektrôlika (zinc, varahina, nikela, chromium, volamena, volafotsy), famafazana elektrostatika, sary hosodoko, elektroforesis, fanontana lamba vita amin'ny landy, fanodinana, fanamaintisana, fikajiana
* Ny fametahana metaly takelaka dia mora hahatratra ny famokarana mahomby amin'ny alàlan'ny mekanisation sy automation mora mahatsapa mekanisation sy automation miaraka amin'ny fahombiazan'ny famokarana avo; ny ampahany manisy tombo-kase dia manana habe marina sy fifanakalozana tsara; malama sy malama ny tampony, mazàna tsy misy milina. Izy io dia be mpampiasa amin'ny fiara, fitaovana elektrika, fitaovana, fiaramanidina ary indostria mpamokatra hafa.
Mestech dia manome anao vokatra sy serivisy fanoratana amin'ny vy. Raha misy mila na mila mahafantatra bebe kokoa dia mifandraisa aminay.
Previous: Ahoana ny fomba hisafidianana ny mpanamboatra mould injection anao
Manaraka: Famolavolana trano elektronika
Famolavolana plastika mangarahara
Famolavolana tsindrona plastika plastika
10 karazana resina plastika sy fampiharana
Fanamboarana tsindrona kodiarana Elastomer TPS